आत्महत्या दुरुत्साहन आरोपमा तीन पक्राउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
गोरखा — आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा गोरखामा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
गोरखा नगरपालिका–१० विरेनचोककी २३ वर्षीया युवतीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको किटानी जाहेरीपछि आरोपितलाई सोमबार पक्राउ गरिएको गोरखा प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र गुरुङले बताए ।
पक्राउ पर्नेमा सोही ठाउँका मन्जु राना, हिरा राना र मनमाया राना छन् । तीनै जना एकै परिवारका हुन् । ती युवती गत शुक्रबार आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।
‘युवतीलाई अनावश्यक तनाव दिने गरेको उजुरी आएको छ,’ गुरुङले भने, ‘गाली बेइज्जती गर्ने समाजमा बस्न पनि समस्या पारेको व्यहोराको उजुरी आएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेका छौं ।’
जिल्लामा पहिलो पटक आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता भएको पनि प्रहरीले जनाएको छ । आरोपित विरुद्ध जिल्ला अदालत गोरखामा आत्महत्या दुरुत्साहनअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी १० दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७७ २०:०९
ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिए त पार्टी फुटिहाल्छ : मणि थापा (अन्तर्वार्ता)
'हामीले राजीनामा मागेका छैनौं, दुई अध्यक्षबीच पावर सेयरिङ हुनुपर्‍यो'
काठमाडौँ — नेतृत्वमाथि सहमतिका लागि दबाब बनाउन नेकपाका स्थायी कमिटीका ११ सदस्य दुईपटक छलफलमा जुटेका थिए । त्यसैमध्येका एक हुन् मणि थापा । उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन लगाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । नेकपा विवादको सेरोफेरोमा थापासँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानी :
नेकपा विवाद अहिले कुन अवस्थामा छ ?
समाधानउन्मूख छ ।
यसको मतलब पार्टी विभाजन टरेको हो ?
विभाजनको खतरा करिब–करिब टर्‍यो ।
तपाईंहरु स्थायी कमिटीका ११ जना नेताहरुको छलफलको विवाद समाधानमा के भूमिका रहृयो ?
मुख्य नेताहरुलाई सहमतिको दिशातिर लैजाने, बैठकमा भएका धेरै तितोपिरो र बाहिर भएका असन्तुष्टिलाई ‘कुलडाउन’ गर्न मद्दत पुग्यो । त्यसबाहेक सबैलाई पार्टी एकताको विकल्प छैन भन्ने वातावरण बनाउन पनि ११ जनाको छलफलले राम्रै भूमिका खेल्यो । मुख्य नेताहरुले पनि हाम्रा सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो ।
विवाद समाधानमा तपाईंहरुको सूत्रचाहिँ के हो ?
पार्टी एकता हुँदाको मूल सिद्धान्तको जगमा टेकेर दुई अध्यक्षले बहसको प्रारम्भ गर्नु पर्छ । त्यही सूत्रभित्र रहेर अहिले उहाँहरुले छलफल गर्नु भएको छ ।
नेकपाको विवाद दुई अध्यक्षले मात्रै हल गर्ने विषय हो कि यसमा अरु शीर्ष नेताको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ?
पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको हुँदा मुख्य त दुई अध्यक्षकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दोस्रोमा अरु वरिष्ठ नेताहरुलाई पनि विश्वासमा ल्याउनु पर्छ । तर, मुख्य त दुई अध्यक्षकै सहमति कुरा हो ।
स्थायी कमिटीका तपाईंहरु ११ जनामात्रै किन ? अरु नेताहरु बस्न नचाहेर वा नबोलाउनु भएको ?
कसैलाई बोलाउने नबोलाउने भन्दा पनि मन मिल्ने, तर्क मिल्ने जस्तो भएपछि ११ जना जम्मा भएका हौं । अब अरु साथीहरुलाई पनि विस्तारै समावेश गरेर जानु पर्छ । यसलाई गुट बनाउन भएन । गुट बन्ने खतरा पनि हुन्छ । अहिले पार्टी एकतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पार्टीका अर्न्तरविरोधलाई सहजीकरण गर्न सामान्यतया ११ जना भन्ने भयो । अरु साथीहरुलाई पनि छलफल बहसमा ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । अब बस्नुपर्ने आवश्यकता महशुस भयो भने अरु साथीलाई पनि समावेश गर्ने कुरा भएको छ । अहिले दुई अध्यक्षबीच ठिकठाक छलफल चलिरहेको छ । उहाँहरुबीच कुरा मिलेन भने मात्र हाम्रो औचित्य रहने हो । उहाँहरुबीच केही कुरा अलमल भयो भने मात्रै हामी बस्ने हो मिलाउन ।
दुई अध्यक्षबीचको छलफल पनि एक हप्ता हुन लाग्यो । कुनै सहमति जुटेको देखिादैन । बरु आ–आफ्नो अडानमा देखिनुभएको छ नि?
अहिलेसम्म उहाँहरुले आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ । आजभोलीबाट समझदारीतिर जाने कुरा गर्नुहुन्छ । अहिलेसम्म आफ्नो अडान राख्ने कुरा ठीक छ । अडान राख्ने रातारात फेर्ने अडान सुहाउदैन । तर, विस्तारै ती अडानलाई सहमतितिर बदल्ने छलफल हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सहमतिको विकल्प छैन । एकताबाहेक अर्को विकल्प छैन ।
तपाईंहरु विधि पद्धतिको कुरा पनि गर्नुहुन्छ । बैठकलाई स्थगित गरेर विवाद समाधानमा लागि दुई अध्यक्षलाई जिम्मा दिनु भएको छ । स्थायी कमिटीको त केही अर्थ नै भएन नि हैन ?
विधानअनुसार काम गरेको भए विवाद हुने थिएन । अहिले पार्टीमा संक्रमणकाल हो । संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्नेबेलामा विधानलाई मात्रै आधार मान्ने हैन सहमति सहकार्य अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यो संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्न विधानलाई पनि अगाडि राख्नु पर्छ । अरु छलफल बहसलाई पनि अगाडि राख्नु पर्छ । विधानले मात्र पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन । तर, अन्तत पार्टीलाई विधिमै लानुपर्छ भन्ने छलफल हो ।
मतलब नेकपाको अहिलेको विवाद दुई अध्यक्षको मात्रै हो ?
मुख्यत पार्टी एकताले पूर्णता नपाएको विवाद हो–एउटा । दोस्रो, सरकार र पार्टीबीच समन्वयको अभाव हो । तेस्रो, विधिप्रक्रिया पनि भएन भन्ने विवाद हो । यी सबै विवादको निष्कर्ष पार्टीभित्र अर्न्तविरोध हो ।
दुई अध्यक्षबीच कुराकानी हुने सचिवालयकै अरु नेताहरु संवादमा नबस्ने भईरहेको छ । नेकपामा मुख्यत तीन समूह देखिन्छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुई अध्यक्षको छलफलमा हुनुहुन्न । यसमा उहाँको असन्तुष्टि नहोला त ?
उहाँको असन्तुष्टि हुन सक्ला । हुँदै हुन्न भन्ने कुरा होइन । शक्तिको कुरा गर्ने हो भने अहिले नेकपामा धेरै शक्ति छन् । अहिले दुई पार्टीको एकताबाट जन्मेका पोजेटिभ र नेगेटिभ अवधारणाहरुलाई कंक्रिट गर्ने बेला हो । यसले नै अरु समस्या पनि जन्माएको हो । पार्टीमा वरिष्ठ नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुका समस्या पनि पार्टीले हल गर्नुपर्छ । उहाँहरु पनि यो समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक लागिरहनु भएको छ । तर, तीन–चारवटा शक्ति छन् भन्ने हैन । पार्टी एकता र दुई वटा धारलाई समायोजन गर्ने काम मुख्य हो ।
स्थायी कमिटी बैठक लगातार स्थगित भयो, फेरि साउन २ गतेसम्मका लागि सरेको छ । २ मा बस्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
२ गतेबाट बैठक बस्छ ।
दुईअध्यक्षबीच सहमति जुटेन भने ?
उहाँहरुबीच सहमति भएन भने पनि फेरि समय थप्ने स्थिति अब बन्दैन । समय थप्नु हुँदैन । सहमति भयो भने पनि बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । सहमति भएन भने पनि के–के विषयमा सहमति भएन त यो २ गतेको बैठकमा जानकारी दिनुपर्छ । दुई अध्यक्षले समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन, सचिवालयले पनि सकेन भने स्थायी कमिटी सक्रिय हुन्छ । त्यसपछि समस्या समाधान गर्नेतर्फ सक्रिय भूमिका स्थायी कमिटीले खेल्छ ।
पूर्वमाओवादीभित्र तपाईंसहित केही नेताहरु अध्यक्ष दाहालसँग असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने छ । तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरिरहनु भएको छ । तपाईंहरुले दाहालको कार्यशैलीमाथि केही प्रश्न हुन् कि ?
हामी पार्टी एकतालाई जोगाउने अभियानमा छौं । हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल)सँग असन्तुष्टि पनि होइन, ओली कमरेडसँग सन्तुष्टि पनि हैन । पार्टी एकता अहिले मुख्य हो । आफ्ना आफ्ना महत्वकांक्षा र चाहना गौण हुन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । त्यसकारण असन्तुष्टि भन्ने होइन । पार्टी एकता र नेताहरुलाई बलियो बनाउने विचार हो ।
तर, योबीचमा तपाईंहरुको भूमिकालाई लिएर दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु शसंकित भएको भन्ने पनि आएको थियो त ?
प्रचण्ड समूह, ओली समूह, माधव नेपाल समूह भनेर भनिने बाहिर हो । कुनै समूहको अवधारणामा विश्वास गर्न हुँदैन । विचारको बहस हुने बेला हामी कहाँ अडिन्छौं त्यो अर्को कुरा हो । तर, अहिले हामी समूहभन्दा पनि पार्टी एकतामा अडिएका छौं । समूहमा रहेर पार्टी एकता हुँदैन । स्थायी कमिटीका ११ जनाको टिम बनेको कारण पनि त्यही हो । हामी कुनै समूहमा बसेर पार्टी एकतालाई कंक्रिट गर्न सक्दैनौं । समूहमा भए त प्रचण्ड कमरेडले जे भन्नु भयो त्यो मान्नुपर्‍यो हामीले । उहाँले त ओलीलाई दुवै पदबाट फाल्ने भन्नु भएको छ । ओली कमरेडले दुवै पद छाड्दिन भन्नु भएको छ । त्यसकारण त्यो समूहका विचारले अब काम गर्दैनन् भन्ने निष्कर्ष हो ।
तपाईंलगायतका नेताहरु झम्सीखेल भेलामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो समूहले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसो भए तपाईंहरुको 'लाईन' के हो ?
हामीले कहिलै पनि राजीनामा मागेका छैनौं । हाम्रो भनाई स्पष्ट छ । दुई अध्यक्षबीच पावर सेयरिङ हुनुपर्‍यो । पार्टी एकताको मूलमर्म अनुसार हुनुपर्‍यो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं । सहमति त्यसमै हुन्छ । त्यसपछि को सही को गलत भन्ने समयले बताउँछ । प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिएपछि त पार्टी भंग भईहाल्छ नि ! पार्टी फुटीहाल्छ । त्यो एकताको मर्म बाहिर हुन्छ । बहुमत र अल्पमतले निर्णय गर्ने बेला हैन यो । सहमतिबाट टुंगाउनु पर्छ ।
दुईअध्यक्षबीच सहमति भएन भने स्थायी कमिटी बहुमत र अल्पमतमा जाने देखिन्छ । त्यसो भए तपाईं के गर्नुहुन्छ ?
स्थायी कमिटीमा कसैको बहुमत पुग्दैन । बहुमत–अल्पमततिर गएर निर्णय भयो भने पार्टी, सरकार र राष्ट्रका निम्ति दुर्भाग्य हुन्छ । त्यहाँ कोही पनि पुग्नु हुँदैन ।
प्रकाशित : असार ३०, २०७७ २०:०२